Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy 101
Alakamisy Febroary 25, 2021 Asabotsy 27 Febroary 2021 Douglas Karr
Ahoana no hanombohako haino aman-jery sosialy? Ity dia fanontaniana iray izay tohizako hatrany rehefa miresaka momba ny fiantraikan'ny media sosialy amin'ny ezaky ny varotra orinasa aho. Voalohany, andao hodinihintsika ny antony itiavan'ny orinasanao ho mavitrika amin'ny media sosialy.
Antony mahatonga ny orinasa mampiasa marketing ara-tsosialy
Ity misy horonantsary mpanazava tsara amin'ny fomba 7 ahafahan'ny marketing amin'ny media sosialy mitondra ny valin'ny orinasa.
Ahoana no hanombohana amin'ny haino aman-jery sosialy
Safidio ny tambajotra sosialinao - Mitadiava vondrona indostrialy sy mpanjifa tsy manam-paharoa eo amin'ny sehatra media sosialy tsirairay. Tsy mpankafy mifantina fotsiny ny iray aho ary tsy miraharaha ny iray hafa. Mino aho fa afaka mandray anjara amin'ny sehatra rehetra ianao - fa mifantoha sy kendreo izay manomboka manararaotra ny fotoana. Tsy ny demografika fotsiny no jerena raha tsy ny sary rehetra.
Fenoy ny momba anao - Rehefa mahita sary mombamomba ny besinimaro aho, ny mombamomba anao tsy hita, na ny mombamomba anao tsy feno dia misalasala foana aho manaraka na miditra amin'ny orinasa na olona amin'ny media sosialy. Araraoty ny fotoana anaovanao azy ary manome mombamomba tsy manam-paharoa fa mazava izay mampahafantatra ny tanjonao hahatongavanao any.
Tadiavo ny Feonao sy ny Tononao - Zava-dehibe amin'ny Internet ny tsy fitoviana amin'ny marika, ka alao antoka fa mametraka feo tsy miova ianao rehefa mizara sy mamaly amin'ny media sosialy. Ataovy ao an-tsaina fa tontolo be atao sy be olona any io, aza mankaleo!
Ampidiro ny Visual - Misy fiantraikany lehibe amin'ny fampiroboroboana sy fizarana ireo fanavaozana ny haino aman-jery sosialy ny sary sy ny horonan-tsary. Makà sary, ampidiro horonan-tsary, amboary ny fizarana horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy, ary zarao ny sarimihetsika fohy amin'ny tantara an-tserasera mba hahitan-tombo indrindra ny sehatra tsirairay tianao hidiranao.
Fidio ny paikadinao amin'ny famoahana lahatsoratra - Ny vao haingana, matetika ary misy ifandraisany dia ireo teny telo natosika tato anatin'ny folo taona farany niaraka tamin'ny mpanjifanay ary hanohy hanery mandritra ny folo taona ho avy. Ilaina ny manome lanja ny mpanaraka anao! Tsy mpankafy fampitahana zarazaraina aho, zarao rehefa misy lanjany ho an'ny mpihaino na fiaraha-monina misy anao izany.
Mamolavola cadence - Ny mpankafy sy ny mpanaraka anao dia hanantena fanavaozana vao haingana sy matetika avy aminao. Matetika ny haino aman-jery sosialy dia lalao fanentanana rehefa zaraina sy ankasitrahana ny atiny. Aza kivy amin'ny voalohany amin'ny fizarana kely sy fizarana kely… miasa hatrany fa aza milavo lefona! Raha mijanona ianao - na inona na inona antony - dia ho hitanao matetika ny rano mitete izay tsy maintsy resinao indray.
Alamino ny kalandrie sosialinao - Misy vanim-potoana ve ny orinasanao? Misy antontan'isa mifandraika ve azonao averina ao anaty fandaharam-pifaneraserana ao amin'ny piraofilinao? Azonao atao ve ny misafidy lohahevitra iray izay azonao resahina isam-bolana na isan-kerinandro aza amin'ny Internet? Ny fandaminana ny tetiandro ara-tsosialy anao dia fomba iray lehibe hampitomboana ny fahefanao media sosialy, ary ahafahanao maneso ny ho avy izany ary mampahatsiahy ireo olona taloha fa hifikitra aminao izy ireo.
Aza adino ny Call to Action - Ny lalàn'i mivarotra foana tsy mandeha amin'ny Media Sosialy… fa informin foanag manao! Ny tanjonao dia ny hampahafantatra sy hanome lanja ny tamba-jotra. Ampahatsiahivo tsindraindray izy ireo hoe inona no azon'izy ireo atao mba hifaneraserana aminao sy ireo vokatrao sy serivisinao. Ampidiro ny Call-To-Action ao amin'ny piraofilinao sosialy, io dia fomba tsara handefasana orinasa bebe kokoa.
Raha nampianatra aho a Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy 101 kilasy, azoko atao ny manampy paikady vitsivitsy tsy hita amin'ity infographic ity:
Fanaraha-maso laza - Fampiasana fitaovana fanaraha-maso media sosialy lehibe, tokony hihaino izay voalaza momba ny vokatrao, serivisinao na olonao ianao. Ilaina ny fanairana amin'ny fotoana tena sy valiny haingana ary vahaolana.
Fitsikilovana ara-tsosialy - Ny serasera amin'ny media sosialy dia manome fampahalalana marobe izay tokony hojeren'ny orinasao. Ny fanontaniana Prospect, ny hevitry ny mpanjifa ary ny fampahalalana mahazatra dia afaka manome fomba fijery sarobidy ho an'ny orinasanao.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - Ankehitriny, mihoatra ny taloha, ny mpanjifa sy ny orinasa dia manantena ny orinasa hamaly ny fangatahana serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny alalàn'ny fantsona sosialy. Satria ny media sosialy dia forum ho an'ny daholobe, dia fotoana tsy mampino ho an'ny orinasa ny mampiseho ny fahaizany mitondra vahaolana amin'ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay hijeren'ny hafa azy ho fananana.
Mametraha tanjona ary manara-maso ny zava-bita - Ny hetsika toy izao manaraka izao, fandraisana andraikitra, fahatsapana ary fizarana dia mitarika tondro izay tokony harahi-maso ny fironana. Ny media sosialy dia afaka mitondra fahatsiarovan-tena ary ny fanentanana dia afaka mitondra fahefana sy fahatokisana. Ny fahefana sy ny fahatokisana dia mety hisy fiantraikany amin'ny laharan'ny motera fikarohana. Ary, mazava ho azy, izany rehetra izany dia afaka mitarika valin'ny orinasa toy ny fihazonana, fahazoana ary fitomboan'ny sandan'ny mpanjifa.
Ity infographic avy amin'ny Venngage mandeha amina orinasa amin'ny alàlan'ny fametrahana sy fampivelarana ny paikadiny amin'ny marketing amin'ny alàlan'ny media sosialy. Ary misy torohevitra tsara eto ho an'ny mpivarotra efa napetraka ihany koa!
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifahanombokafitantanana lazafanaraha-maso lazafihetseham-pofaharanitan-tsaina ara-tsosialyhaino aman-jery sosialyfahazoana media sosialytanjon'ny media sosialyfampisehoana haino aman-jery sosialyfitazonana ny media sosialyTetikasan'ny media sosialymanomboka media sosialyvenngage
Ahoana ny fomba hampitomboana ny laharam-pikarohana amin'ny alàlan'ny fitadiavana, fanaraha-maso ary fanovana ireo lesoka 404 ao amin'ny WordPress
Universal Media Universe: Inona avy ireo sehatra media sosialy lehibe indrindra tamin'ny 2020?